ထန်းရည် ဘာလို့ မထွက်တာလဲ??? ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ထန်းရည် ဘာလို့ မထွက်တာလဲ???
Author: lubo601 | 4:11 PM | No မှတ်ချက် |
NayHtet HtetAung added2new photos.
ကျွန်မ ကွင်းဆင်းအင်တာဗျူးထားပါတယ်။ ဗွီဒီယိုလည်း ရိုက်ထားပါတဟ်။ ထန်းပင်ပိုင်ရှင်တွေက ရောင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ထန်းရည်မထွက်တော့တဲ့ အပင်ကို ရွေးပြီးရောင်းတာပါလို့ ဒေသခံတွေက ဖြေပေးထားပါတယ်။ ထန်းရည် ဘာလို့ မထွက်တာလဲ??? လို့ မေးတော့ ၁။မိုးခေါင်လို့။ ၂။ ယူကလစ်တွေက မြေကြီးထဲက ရေတွေ မတရားစုပ်တော့ ထန်းပင်နဲ့ တခြားအပင်တွေက ရေကို ယူကလစ်နဲ့ ပြိုင်ပြီးမစုပ်နိုင်တော့လို့ဟု သူတို့ ထင်မြင်ယူဆကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပင်တွေက ရေစုပ်တာကို ဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ ??? ဘယ်အချက်နဲ့ ပြောနိုင်တာလဲ??? လို့မေးတော့ အပင်ထဲမှာကို ရေတွေ သိုလှောင်ထားတာပါလို့ ဖြေပါတယ်။ အတူပါလာတဲ့ ရုက္ခဗေဒ ဒေါက်တာက မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ ပြောပြီး ခေါင်းရမ်းရင်းပြုံးပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ အထောက်အထား ပြပေးပါလားလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒေသခံတစ်ယောက်က ချက်ခြင်းပဲ လက်ကောက်ဝတ်လောက် အပင်တစ်ပင်ခုတ်ယူလာပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်သား ခုတ်ယူသွားပြီးသား အပင်ကြီးကနေ ပြန်ပေါက်လာတဲ့ အတက်တစ်ခုပါတဲ့။ အဲ့ဒီအပင်ငယ်ကနေ ရေတွေတစက်စက် ကျနေပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ အတူတူပါလာတဲ့ ရုက္ခဗေဒ ပညာရှင်က မျက်လုံးပြူးပါတဟ်။ "ဒါမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးးး ယူကလစ်အကြောင်း စာပဲဖတ်ဖူးခဲ့တာ။ အတော်ဆိုးတဲ့ အပင်ပါလားးးး" လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ခုတ်ယူပြီး ငါးမိနစ်ခန့်နေမှ ရေကို ဖန်ခွက်နဲ့ စတင်ခံယူလိုက်တော့ ခွက်ရဲ့ တစ်ဝက်နီးပါး ရရှိလိုက်ပါတယ်။ တစ်လီတာ ရေသန့်ဗူးထဲ ပြောင်းထည့်တော့ အရစ်တစ်ရစ်စာ ရှိပါတယ်။ ဒီအပင်ငယ်လေးက ဒီလောက်ရေတွေရတာဟာ အံ့သြစရာကြီးပါ။ ရေတွေက အစေးမဟုတ်ပါဘူးး ဂျယ်လီပုံစံ ခရင်မ်ပုံစံလည်း မဟုတ်ပါဘူးးး။ ရေမှရေစစ်စစ်တွေပါ။ လက်နဲ့တို့ပြီး မြည်းစမ်းကြည့်တော့ အချဉ်ဓါတ် မြင့်မားနေပြီးးး အက်ဆစ်ဓါတ် လွန်ကဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
" မြင်ပြီလားဆရာမတို့ ဒီကောင်တွေက ရေတွေ ဒီလောက်စုပ်နေမှတော့ ကျုပ်တို့ထန်းပင်တွေ ရေဘယ်ရတော့မလဲဗျ။ ငှက်ပျောပင်ခုတ်ရင်တောင် ရေဒီလိုမထွက်ဘူး မရဘူးး။ ကျုပ်တို့ဒါ့ထက်ပိုပြီး သက်သေပြစရာလည်း မရှိတော့ဘူးးးး။ နောက်ထပ်ဆိုးတာက အရွက်တွေပဲ။ ဒီအရွက်တွေကြွေရင် ဘယ်မြက် ဘယ်အပင်ငယ်မှ သူ့အောက်မှာ မပေါက်နိုင်တော့ဘူးးးး။ ပူတာကိုးဗျ တရှိန်ရှိန်နဲ့။" လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ယူကလစ်ပင်က ထွက်ကျလာတဲ့ ရေတွေက နေ့လည်၁၂ကနေစပီးး ညထိ တစ်နေကုန်စာ ဖြူ စင်ကြည်လင်နေပါတဟ်။ နောက်ရက်မနက်ကစပြီး နီကျင်ကျင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ၃ရက်လောက်နေလို့ ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ဖို့ ထည့်ပေးလိုက်တော့ ဝါကျန်ကျန်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ စေးထန်းခြင်း စေးကပ်ခြင်း လုံးဝမဖြစ်ဘဲ အရည်စစ်စစ်အဖြစ်နဲ့ပဲ ရှိနေပါတယ်။